Malunga nathi-Gepair mesh
IGepairi-mesh ikakhulu kugxila kuyilo olujikelezayo lwentsimbi kunye nemveliso, enamava eminyaka engama-20 kule ntsimi. I-wireless wireless wire mesh ye-wire mesh, i-wire cable mesh, luhlobo lwe-mesh eyenziwe ngezandla esetyenziswa ngokubanzi kwindawo evaliweyo ye-zoo mesh, i-bird aviary, izitebhisi, udonga oluhlaza lwentambo ye-wax kunye ne-Landcaping, umhlobiso kunye nobugcisa beentambo, i-balustrade kunye neendlela zikaloliwe i-balcony mesh, ukhuseleko kunye nenkqubo yokhuseleko yokuwa.
Abasebenzi bethu kumzi-mveliso baqeqeshekile kwaye banobuchule kwicandelo lezandla ezenziwe ngentsimbi. Sineenkqubo engqongqo kakhulu ye-QC kwaye sijonga ngononophelo ngaphambi, ngexesha nasemva kwemveliso ye-mesh. Kule minyaka idlulileyo, sihlala sifumana amava axabisekileyo kwimveliso kunye nakuthengiso, kwaye kukho izinto ezinkulu eziziqokelelweyo kuyilo, ukuthengisa kunye nenkonzo yokuthengisa emva kwentengiso. Iimveliso zethu zibonisiwe kwiimarike zase-Australia, eUSA, France, Spain, Mexico, Denmark, Sweden, Japan, South Korea, India, Singapore, Kuwait. Ngokuhambelana nenjongo ehlala ubomi bokuthenga ngetyala, ophuhliswe ngomgangatho, uGepair Mesh wamkela intsebenziswano evela kwihlabathi elisekwe kuphuhliso lwentembeko yomanyano!
IsizathuUkuba yinkokeli kwishishini le-mesh elinzima ngokubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo ze-mesh, iinkonzo ezongeziweyo, ubudlelwane kunye nokwenza inzuzo. Khula kunye nabathengi bethu ababalulekileyo kwihlabathi liphela.
UmbonoUkubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni ezingaphezu koko kulindelekileyo kubathengi bethu ababalulekileyo.
Umyalezo •Ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu kunye nabathengi kunye nokubonelela ngeenkonzo ezingathethekiyo zabathengi ngokulandela ishishini ngokwenza ubuchwephesha kunye netekhnoloji ephezulu.
Ixabiso eliphambili • Sikholelwa ekuphatheni abathengi bethu ngentlonipho kunye nokholo; sikhula ngokudala, ngokudala nangokuyila into entsha; Sidibanisa ukuthembeka, ukuthembeka kunye nokuziphatha ngokuzinzileyo kuyo yonke imiba yokusebenza kweshishini.